トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Information nangonina mba hamoronana ny tambajotra ao amin'ny lisitry ny mpitsidika, Pachipuro in pachinko parlors
Heveriko fa misy mpanjifa izay mahita isaky ny handeha hisakafo any amin'ny pachinko trano izy. Mpanjifa izay mandeha isan'andro Shigeku tongotra noho ny mpiasa toy izany, antsoina hoe ny mpitsidika ao amin'ny pachinko orinasa. Ary, na dia toa tsy araka ny hevitrao marika amin'ny mora fantatra, ny olona sasany antsoina hoe Pachipuro nihinana tao an-pachinko.
pachinko efi-trano, dia heverina ankapobeny Mpanjifa Pachipuro, Ahoana no matetika ho voarara, fa koa ny sarotra ny hilaza. Amin'ny Pachipuro toy izany, na dia ny hoe na dia tsara indrindra ny manao fifandraisana manokana amin'ny ny olona tao, fa ny olona izay tokony hahafantatra ny araka izay afaka miresaka, Mino aho fa mazava ho azy mahasoa.
ny olona tao dia ahitana, fa tsy miankina ihany koa ireo zava-nitranga sy ny notohizany, dia mandeha any amin'ny efi-trano pachinko ihany isan'andro. Pachinko dia ny toerana tena dia, mazava ho azy, fa ny ankamaroany dia ny olona tao dia ireo izay te-miantsena mihitsy.
ny fanontaniana na ny olona manana ny hahatakatra, fa mbola hitranga amin'ny tantara iray hafa, satria ny fandikan-teny ho any amin'ny efi-trano pachinko ihany isan'andro, dia fantatsika tsara hijoro ny hetsika ihany koa ny tsara indrindra. , Ohatra, fa ny sehatra dia, toka Nandevozin'ny matetika omaly, izahay efa fampiasam-bola be, toy ny resaka nivoaka indray aho rehefa avy nitodika be matetika, no ianao na mandre isan-karazany ao amin'ny karajia.
By hevitra hanao fifandraisana manokana amin'ny ny olona tao, avy ao amin'ny antontan-kevitra, dia ho toy ny vaovao mamaky tsy ho mora foana, dia azo atao ny mahazo mora. Raha ny mahazatra, na misy asa, heveriko fa tsy misy na dia dia sarotra ny mandeha any amin'ny efi-trano pachinko isan'andro.
vaovao avy amin'ny ny olona tao, fa mety koa indraindray ny zavatra toy ny tsara anyhow, ka ianao, na ahy mba hilazana ireo izay tsara fijery Raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia jereo miteny. Misy indrindra ny tombontsoa mba ho izy ireo hahavita izany ny ny olona tao.
no fifandraisana manokana ny
Pachipuro avy eo, saingy mieritreritra aho fa izany no zava-misy ao amin'ny tena zava-misy amin'ny sarotra. Na izany aza, raha dia afaka manao fifandraisana manokana amin'ny vintana rehetra Pachipuro, Heveriko fa tsy isalasalana fa ho loharanom-baovao mampahery ho mihoatra noho ny olona tao.
_x 000D_ Pachipuro dia, satria mivelona amin'ny pachinko, no Mitana fianarana. Tsirairay ny specs sy ny fampisehoana na, sisin-tsipika, toy ny rehefa mba hanakana na ny fanafihana, dia heverina ho isan-karazany ny modely vaovao ho an'ny tsirairay.
Na izany aza, eo amin'ny raharaha Pachipuro, tsy toy ny tsy tapaka ianao, ao amin'ny faribolana manodidina ny matsiro pachinko efi-trano mba hitady ny Fandresena. Tsy hoe misy isan-andro izany pachinko parlors, ireo izay tsy mandeha ihany koa pachinko fivarotana fa mazava ho azy, koa ireo izay mandeha any isan-karazany pachinko parlors, koa nahita koa ho tapa-kevitra fa
Pachipuro, heveriko fa sarotra . Ny tsara indrindra ny hoe, tsy fantatro Pachipuro, izany dia ny ho tonga namana amin'ny olona izay tsara avy hatrany. Rehefa niezaka ny hiresaka, raha na Kuwashika 'ao amin'ny milina ny vaovao, ka mety izay mahazo ny hanome vaovao manan-kery.